20 ka mid ah mawduucyada Ecommerce ugu fiican ee loogu talagalay Wordpress | Abuurista khadka tooska ah
Carlos Sanchez | | General, WordPress
WordPress aad ayuu u weyn yahay in barnaamijkan aan loo isticmaalin oo keliya sameynta baloogyo, Waxaa sidoo kale jira shirkado badan oo ku aasaasay dukaankooda casriga ah CMS-kan weyn ee aan waligiis joojin horumarka.
By the way, waxaan ka faa'iideystaa fursad aan ku dhigo wax aan u maleynayo inaynaan halkan ku sharraxin:
Un nidaamka maaraynta maaddada (in ingiriisi Nidaamka Maareynta Maareynta, soo gaabiyey CMS) waa barnaamij kuu ogolaanaya inaad abuurto qaab dhismeed taageero ah (qaabeynta) abuurista iyo maaraynta nuxurka, inta badan gudaha bogagga shabakadda, ka qaybgalayaashu.
Waxay ka kooban tahay is-dhexgal kaantaroola mid ama ka badan database halkaas oo goobta martigelinta ay ka kooban tahay. Nidaamku wuxuu oggol yahay maareynta madaxbannaan ee nuxurka iyo naqshadeynta. Sidaa darteed, waa suurtagal in la maareeyo nuxurka isla markaana la siiyo bogga naqshad ka duwan xilli kasta iyada oo aan loo baahnayn in la qaabeeyo nuxurka mar kale, iyo sidoo kale in loo oggolaado daabacaadda sahlan ee la xakameyn karo barta tafatirayaal badan. Tusaalaha caadiga ahi waa kan tifaftireyaasha wax ku qora nidaamka iyo mid kale oo heer sare ah (buugga) kaas oo u oggolaanaya waxyaabahaas inay u muuqdaan dadweynaha oo dhan (iyaga ayaa oggolaanaya).
Hagaag, maxaa lagu sheegay cinwaanka, 20 heesood oo waaweyn kadib boodkii si loo bilaabo dukaan yar.
1 1. Bakhaar
2 2. Mawduuca Ecommerce
5 5. Dukaanka WP
6 6. Dulucda Xaraashka
7 7. Dulucda Suuqa
8 8. Bakhaarka Kidz
9 9. BakhaarPressPress
10 10.e Alaabta
11 11. Gaadhi Vanilla ah
12 12. Kartoonka Midabka
13 13.Cherry Cart
14 14. Mowduuca Xayeysiiska Nasiibka ah
18 18. Gaari fudud
20 20. ee Virashop
Template-ka Bakhaarku waa sheeko ecommerce weyn oo WordPress ah, oo leh runtii muuqaal fiican oo shaqeynaya; way fududahay in la rakibo oo la sii wado maamulka gadaal la heli karo. Abuureyaasha mawduuca ayaa diyaar u ah su'aalaha iibka kahor iyo taageerada macaamiisha.
2. Mawduuca Ecommerce
Kani waa mawduuc caan ah oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay dejiyaan oo ay maareeyaan dukaamada ecommerce wax ku oolka ah. Mawduucu waa mashiinka raadinta oo la hagaajiyay lana habeyn karo sidaa darteed waa loo waafajin karaa si loo waafajiyo meherad kasta oo ganacsi oo guriga ku saleysan.
AppCloud waa mawduuc si qurux badan oo nadiif ah oo xirfad leh u muuqda, oo leh qaab laba-sadar ah, is-dhexgal is-dhexgal ah iyo xulashada jihada toosan ama toosan ee sawirada iyo barnaamijyada. Astaamaha ecommerce ee mawduucu ka kooban yahay waxaa ka muuqda, iibinta ugu sarreysa iyo liistada alaabooyinka loo qoondeeyey.
Mawduucani wuxuu bixiyaa fudeyd xad dhaaf ah oo loo adeegsado iibiyaasha iyo macaamiisha labadaba, si fudud loogu qaabeeyo isdhexgal dareen leh oo si adag loo qaabeeyey. Template-ku wuxuu leeyahay astaamo awood badan waana la dhalan-rogi karaa si loogu habboonado wax soo saar kasta.
5. Dukaanka WP
Iibiyeyaashu waxay aasaasi karaan dukaan internetka ah oo laga bilaabo xoqitaanka mawduucan, iyagoo soo bandhigaya alaabooyin iyo lacag bixinno fudud, dhoofinta iyo maaraynta saamiyada.
6. Dulucda Xaraashka
Mawduucan sare ee WordPress wuxuu siiyaa dadka isticmaala fursad ay ku abuuraan xaraashka internetka ama websaydhka xaraashka. Hadday tahay gawaarideeda ama baaskiilkeeda, buugaagteeda ama waxyaalaheeda qadiimiga ah, mar haddii hal-ku-dhigga si fudud loo isticmaalo uu yahay ganacsade dejineed ayaa xaraashi kara nooc kasta oo hanti ah oo internetka ah.
7. Dulucda Suuqa
Mawduuca Suuqa wuxuu u beddelaa WordPress kasta dukaanka tooska ah ee internetka. Qaab dhismeedkeedii hore mawduucu wuxuu leeyahay muuqaal iyo dareemid baloog joogto ah, laakiin waxaa jira xulashooyin badan oo lagu qaabeyn karo naqshadda oo ay ku jiraan doorashada dukaan shaashad-aragtida hore ah si loo soo bandhigo alaabada.
8. Bakhaarka Kidz
Mawduucan dhalaalaya iyo saaxiibtinimada leh ayaa ah hab fiican oo lagu soo bandhigo alaabada loola jeedo carruurta iyo, ka sii muhiimsan, waalidkood. Dukaanka midabada leh ee shaqeynaya waxaa lagu taageeraa maamulka dhabarka iyo dhammaan astaamaha loo yaqaan ecommerce.
Mawduucan qiimaha leh wuxuu u oggolaanayaa iibiyeyaasha inay u beddelaan baloogyada WordPress-ka dukaanno internetka laga heli karo oo leh qurux iyo xirfad bilic leh. Naqshadeynta waxay leedahay bogag udiyaar garowsan, isdhexgalka PayPal iyo qalab kaladuwan oo adag.
eGoods waxaa loogu talagalay ganacsatada iibiya badeecooyinka la soo dejin karo oo ay ku helaan lacag bixinta PayPal. Fursadaha mawduuca waxaa ka mid ah xulashada nalka ama nidaamka midabka mugdiga ah, labadaba muuqaal ahaan aad u soo jiidan kara, iyo qaabeyn loo qaabeyn karo sawirrada iyo qoraalka. Naqshadeynta waxaa ka mid ah badeecooyin muuqaal ah, kuwa ugu iibka badan, soo-deyntii ugu dambeysay, waxyaabaha la dhimay iyo foojarrada hadiyadda.
11. Gaadhi Vanilla ah
Vanilla Cart waa soojiidasho soo jiidasho leh oo aad u qaabeysan oo si qaabeysan loo qaabeeyey oo leh shay si fiican loo qaabeyn karo. Naqshadeynta fudud ee weli quruxda badan, oo leh nidaam midab khafiif ah iyo xoogga la saarayo tallaalada alaabada, ayaa u oggolaanaysa saamiga inuu isagu iska hadlo.
12. Kartoonka Midabka
Mawduucani wuxuu ku saleysan yahay Vanilla Cart, oo leh dheellitir lagu daray oo ah midab midab leh oo ku jira xulashooyinka. Xulashada siddeed midab ayaa u oggolaanaysa dadka isticmaala inay u keenaan midab midab leh dukaamada ganacsiga, iyagoo si taxaddar leh u xulanaya isku-darka saxda ah ee ku habboon suuqooda gaarka ah.
Mawduucani gabi ahaanba waa mid aad u yar, darbiga hoos ugu dhiga hal tiir oo aan lahayn bar dhinac ama qaybta barta. Waxaa lagu dhisay fikradda ah 'isku duubnaanta fudaydka iyo xannibaadda', Cherry Cart waa madal si xamaasad leh loogu martiqaaday oo lagu soo bandhigayo alaabada.
14. Mowduuca Xayeysiiska Nasiibka ah
Mawduucan quruxda badani wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay boggooda u rogaan bogagga internetka ee xayeysiiska ah. Isticmaalayaashu waxay maareeyaan goobta waxayna ku soo celinayaan lacag si ay ugu soo bandhigaan xayeysiiska goobta. Naqshadayntu waa mid isku dhafan 'PayPal', oo ka kooban guddi maamul isla markaana si buuxda loo habeyn karo si loo waafajiyo suuq kasta oo xayeysiis ah.
FolioShop waxaa loogu talagalay iibiyeyaasha doonaya is-dhexgal soo jiidasho leh oo dareen leh kaas oo lagu soo bandhigayo alaabada macaamiisha la soo dirayo ama laga soo dejinayo. Mawduuca wuxuu ka kooban yahay saaxir rakibida, hagaha caawinta muuqaalka iyo dhammaan faylalka lakabyada PSD.
ClassiPress waa mawduuc mihnadeed oo loogu rogo blogs-ka WordPress bogagga xayeysiisyada xayeysiinta ah. Nooca ugu dambeeya ee mawduuca wuxuu ka kooban yahay goobo iyo qaabab u gaar ah oo aan xadidneyn, baakadaha xayeysiinta, xulashada barta, bogga hoyga qaabka, digniinta emaylka, xayeysiisyada carousel ee la soo bandhigay, gorgortanka macaamilka iyo quudinta Twitter.
Mawduucan qiimaha leh wuxuu soo bandhigayaa dukaanka ecommerce ee u muuqda xulasho iftiin ama nidaamyo midab madow ah. Xirmada waxaa kujira dhamaan faylalka lakabyada PSD, saaxir rakibida, hagaha caawinta waxaana lagu heli karaa luqadaha Ingiriiska iyo Jarmalka.
18. Gaari fudud
Gawaarida fudud waa mowduuc fudud oo weyn oo u muuqda iibiyeyaasha si ay ugu soo bandhigaan alaab dukaanka hore ee duuban, oo leh asxaab saameyn ku leh asalka. Nidaamka midabku waa la beddeli karaa oo isticmaaleyaashu waxay ku dhejin karaan sawirradooda naqshad si buuxda loo qaabeyn karo.
Tobashop waxaa lagu dhex daray mawduuc kale oo WordPress ecommerce ah, eShop, si looga faa'iideysto fiilooyinka xoogga leh si loo abuuro dukaan internetka oo leh khibrad xirfad sare leh.
20. ee Virashop
Mawduucani wuxuu u baahan yahay maya
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » WordPress » 20 ka mid ah mawduucyada ecommerce ugu wanaagsan ee loogu talagalay WordPress